KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - AMISOM oo ka hadashay qabsashada magaalada Jowhar
Monday 10 December 2012 12:37
AMISOM oo ka hadashay qabsashada magaalada Jowhar
Muqdisho (KON) AMISOM ahaa ka hadashay qabsashadii magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Shabeelaha Dhexe.
Afhayeenka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Cali Adan Xumad ayaa sheegay in ciidamada AMSIOM iyo kuwa dowlada Soomaaliya ay magaalada kula wareegeen si xeeladeesan.
Wuxuu sheegay Al-Shabaab in aysan awood lahayn isla markaana aysan iska difaaci Karin ciidamada dowlada Soomaaliya iyo waliba kuwa AMISOM ee Soomaaliya jooga.
Cali Adan Xumad ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in ay muhiim u ahayd AMISOM in Al-Shabaab laga saaro gobalka Shabeelaha Dhexe xaruntiisa Jowhar oo mudo badan ay ku sugnaayeen kooxdaan.
Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isgarabsanaya ayaa shalay waxay la wareegeen magaalada Jowhar iyo waliba degmada Mahaday halkaasi oo Al-Shabaab ay ku xooganaayeen.